Waa maxay dimoqaraadiyad? | Building Momentum
Waa maxay dimoqaraadiyad?
Qoraalkaan wuxuu sharaxayaa waxa ay dimoqaraadiyadda tahay. Qoraalkaan markii hore wuxuu ku qornaa af ingiriis oo waxaa qoray barofasoor Mareykan ah oo lagu magacaabo Larry Diamond oo Jaamacadda Standford University ka dhiga cilmiga siyaasadda. Qoraalkaan wuxuu kaa caawin doonaa fahamka waxa ay dimoqaraadiyadda tahay.
1. Isbedelka xukuumadaha
Dadka ayaa go’aansada ciddii ku matali lahayd dowladda ayaga oo kala dooranaya xisbiyo iyo shaqsiyaad ku tartamaya doorasho joogto ah oo xor iyo caddaalad ah.
2. Ka qeyb qaadashada siyaasadda waa kaalinta muwaadiniinta laga rabo.
Kaalinta ugu muhiimsan ee muwaadiniinta waa ka qeyb qaadashada siyaasadda.
Muwaadiniinta waxaa ku waajib ah in ay si taxadar le hula socdaan madaxda sida ay u adeegsanayaan awooddooda. Waana in muwaadiniinta ay ka dhiibtaan aragtiyadooda sida ay madaxda wax u wadaan. Waana in muwaadiniinta ay ilaalsadaan danahooda.
Ka qeyb qaadashada doorashooyinka waa masuuliyad saaran muwaadiniinta oo dhan.
Ka qeyb qaadashada siyaasadda waxay noqon kartaa u ololeynta xisbi siyaasadeed ama musharax, ka doodista arimaha siyaasadda, isku soo sharixid jago siyaasadeed iyo xatta ka qeyb galka bannaanbax.
Aad ayey muhiim u tahay in dumarka ay si buuxda aga qeyb gaataan siyaasadda.
Xisbiyada siyaasadeed waa laf dhabarta dimoqaraadiyadda.
Dimoqaraadiyadda waxay xoogeysattaa markii ay muwaadiniinta ay xubno firfircoon ka noqdaan xisbiyada siyaadadeed.
Jiritaanka dimoqaraadiyadda waxay ku xiran tahay muwaadiniinta oo ka qeyb qaatta siyaasadda laakiin ka qeyb qaadashada waa in ay ahaataa si nabad ah oo qadarisa sharciga, una dulqaadata aragtiyada kala duwan ee ururada iyo shaqsiyaadka.
3. Xuquuqda ay dimoqaraadiyadda siiso muwaadiniinta.
Qof walba wuxuu xor u yahay in uu diintiisa ku dhaqmo. Wuxuuna xor u yahay in uu qaato diinta uu doono.
Waxaad xaq u leedahay si nabad ah in aad u mudaharaado iyo in aad ka mudaharaado falalka ay dowladda ku kacdo.
Qof walba waxaa ku waajib ah in xuquuqahaan uu ugu dhaqmo si nabad ah oo dhowreysa sharciga iyo xuquuqda dadka kale.
4. Sharciga ayaa taliya
Sharciga waxaa si caddaalad ah oo eexla’aan ah u fuliya maxkamado ka madax bannaan laamaha dowladda.
Awoodda dowladda waxay leedahay xad oo waxaa xad u ah sharciga. Shaqsi ka tirsan dowladda kuma xad gudbi karo xadka uu sharcigu dhigay.
Madaxda dowladda, madaxweynaha ama xisbiyada siyaasadda midkoodna uma sheegi karo garsoore maxkamad sida uu go’aan aga gaari lahaa dacwad ama kiis.
Madaxda dowladda iyo shaqaalaha dowladda awooddooda uma adeegsan karaan si musuqmaasuq ku jirto. Maxkamado madax bannaan iyo guddi madax bannaan ayaa ciqaabaya musuqmaasuqqa ayagoo aan tixlegin siineyn cidda uu yahay qofka musuqmaasuqqa geystay xatta haddii uu yahay madaxweynaha.
One thought on “Waa maxay dimoqaraadiyad?”